कारोबार रकममा ९६ प्रतिशत वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर कारोबार रकममा ९६ प्रतिशत वृद्धि
मुख्य खबर, लगानी 1 views
कारोबार रकममा ९६ प्रतिशत वृद्धि
लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति रू.१५ अर्बले बढ्यो
सानाकिसानको रू.२१ करोडको कारोबार
मङ्सिर ७, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन शेयर बजार शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन कारोबार रकम तथा कुल बजार पूँजीकरणमा वृद्धि देखापरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम ९६ प्रतिशतले बढेको छ भने लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति रू. १५ अर्बले बढेको हो । कारोबार रकम बढेर रू. ६८ करोड ५७ लाख पुगेको हो भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १७ खर्ब ३५ अर्बमा पुगेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १३ दशमलव शून्य ३ अङ्कले बढेर १ हजार ४ सय ९३ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेको हो ।
साना किसान विकास बैङ्कको संस्थापक शेयरको रू. २१ करोड ९९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीले दिन लागेको २५ प्रतिशत बोनस शेयर प्रति लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका हुन् । मङ्सिर १० गतेदेखि यस कम्पनीको कारोबार नहुने भएपछि विहीवार यस कम्पनीको कारोबार बढेको हो । यस संस्थापक शेयरको शेयर मूल्य स्थिर रहेर अन्तिम मूल्य रू. ९ सयमा सीमित रहेको छ । यस शेयरको १ सय ९९ पटकको व्यापारमा २ लाख ४४ हजार ३ सय ५१ कित्ता शेयर किनबेच भएको हो । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको रू. २ करोड ८१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएर अन्तिम मूल्य रू. ६ सय ५० पुगेको छ ।
यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेर ३ सय १४ दशमलव ४३ अङ्क पुगेको छ । व्यापार समूहबाहेक कारोबारमा आएका बाँकी समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक उकालो लागेको हो ।
सिनर्जी पावर डेभलपमेण्टको शेयर मूल्य ८ दशमलव ६७ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ सय ६३ पुगेको छ भने मिथिला लघुवित्त विकास बैङ्कको मूल्य ८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बढेको हो । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको मूल्य भने ३ सय ८७ प्रतिशत घटेको छ ।
जलविद्युत समूहको परिसूचक २ दशमलव ४५ प्रतिशत बढेको छ । अधिकांश जलविद्युतकम्पनीहरको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक ४६ अङ्क बढेको हो । साथै, लघुवित्त समूहको परिसूचक १ दशमलव ३९ प्रतिशत, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको १ दशमलव २८ प्रतिशत र होटलको १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बढेको हो । बैङ्किङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत, ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत र बीमाको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, व्यापार समूहको परिसूचक भने १ दशमलव ५४ प्रतिशत घटेको छ । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यरू. ४० ले घटेपछि यस समूहको परिसूचक ३ दशमलव ३४ अङ्क बढेको हो ।
यस दिन ९८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, ४२ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने २५ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ६५ कम्पनीको ५ हजार ४ सय ८१ पटकको व्यापारमा १३ लाख ९१ हजार ८ सय ५३ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रन जोन अथवा ४६ दशमलव शून्य ४ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियोभने २ दशमलव ३३ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।